Dhaqanka iyo wakhti firaaqaha | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / Daganaanshaha dalka Iswiidahn / Dhaqanka iyo wakhti firaaqaha
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay dhaqanka iyo wakhti firaaqaha. Waxaynu u baahanahay dhaqan iyo wakhti firaaqo si aynu u dareeno wanaag. Waxaa jira fursado badan dhinaca dhaqanka iyo wakhti firaaqaha ee gudaha Iswiidhan.
Waxaad akhrin doontaa waxyaabo ay ka mid yihiin hawlaha wakhti firaaqaha, sida aad buug uga amaahanayso maktabada iyo in afka Iswiidhishka si wadajir ah loola tababarto dad kale.
Sawir: Amelie Wintzell
Xiisooyinka wakhti firaaqaha ee caadiga ah waa tusaale ahaan isboortiga, daansiga iyo masraxa, in la ciyaaro muusig, in la ciyaaro ciyaar tiifii iyo ciyaar kombiyuutar iyo akhriska buuggaagta. Ururo badan iyo degmooyinku waxay leeyihiin noocyo jihooyin kala duwan iyo hawlo wakhti firaaqo oo aad ka qaybqaadan karto. Dhowr tusaale oo ah noocyada ururrada kala duwan waa ururrada isboortiga iyo dhaqanka, ururrada waxbarasho iyo urur dad aaminsan diin isku mid ah.
In laga qayb qaato hawlaha degmada ama jaaliyadaha kala duwan waxay bixisaa fursada ah in lagu barto dad cusub laguna tababarto luqada Iswiidhishka.
Waxaa jira tiro badan oo jaaliyado iyo hawlo ah oo la kala dooran karo.
Degmooyinka iyo jaaliyadaha waxay mararka qaarkood hayaan hawlo loogu talogalay dadka dalka ku cusub, qaxoontiga iyo ajnabiga si ay ugu sahlanaato inay soo dhex galaan bulshada Iswiidhishka ah. La xiriir degmadaada ama ka raadi bogooda intarnatka si aad u aragto waxa laga helo degmadaada.
Hawlo wakhti firaaqo oo noocee ah ayaa ka jira degmadaada?
aa kuwee xiisooyinka wakhti firaaqaha ee ugu caadisan dalka ama dalalka aad horey ugu noolayd?
Waxaa jira noocyo dhaqan oo badan oo kala duwan. Dhaqan oo dhan waa inuu kaalmeeyo horumarka shakhsiga. Tani micnaheedu waa in dhaqanku keeno in dadku horumaro. Iswiidhan sida dalal kale oo badan waxay leedahay dhaqan badan oo dadka lagu casuumo oo qaabkiisu yahay tusaale ahaan deegaanka dabiiciga ah, taariikh iyo raashin.
Dhismayaasha aad kaga qaybqaadan karto nolosha dhaqanka waa inay heli karaan dadka oo dhan. Tani micnaheedu waa waxyaabo ay ka mid yihiin in ay suurtagal ahaato in dhismayaashan lagu geli karo kursiga qofka laxaadkiisu kala dhantaalanyahay iyo in qoraalada tabeelooyinka la waafajiyay dadka leh hoos u dhac awoodda aragtida ah.
Tusaale dhanka hawlaha xilli firaaqaha iyo nolosha jaaliyadaha:
In la joogo bannaanka ah deegaanka dabiiciga ah waa hawl wakhti firaaqo oo caadi ka ah Iswiidhan. Waxaa jira dhowr ah xadiiqado qaran kuwaas oo aad booqan karto. Waxaa kale oo jira marino socod ahaan lagu tamashleeyo oo badan oo aad socod ku mari kartid. Waxaa jira badanaaba guryo yar ama gabood la galo oo lagu dhixi karo kuna dherersan marinadan lagu tamashleeyo.
Gudaha Iswiidhan dadka oo dhan way joogi karaan deegaanka dabiiciga ah, ma ku xirna qofka mulkiile ka ah dhulkaas. Tani waxaa lagu magacaabaa xuquuqda tamashlaynta.
Sida ku cad xuquuqda tamashlaynta waxaa laguu oggolyahay inaad gurato miraha, likaha iyo ubaxyada bannaanka deegaanka dabiiciga ah, laakiin ma laguu oggola inaad wax ka gurato qof jardiinadiisa. Qaar ka mid ah dhirta waa kuwo la dhowrayo oo aan la oggolayn in la gurto. Kuwaas ma laguu oggola inaad gurato. Waxa kale oo jiri kara qawaaniin gaar ah oo ah dhanka waxa laguu oggolyahay inaad ka gurato xadiiqadaha qaranka iyo seeraha qaranka.
Kantarel, kaarlyoohan iyo kantaraalka taraat waa likayaal la cuni karo, kuwaas oo aad ka guran karto duurka. Ha guran likayaal aanad garanayn. Waxaa jira likayaal sun ah, tusaale ahaan likaha flugsvamp. Duurka waxaa xitaa laga helaa miro badan oo la cuni karo. Miraha guduudan, miraha buluuga ah, miraha huruuda ah iyo miraha haaloonka dhammaantaad way fiicanyihiin in la cuno. Waxaa jira xitaa miro sun ah. Ha guran miro aanad garanayn.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda tamashlaynta kuna qoran bogga ”Dadka iyo deegaanka” ee Informationsverige.se.
Dheeraad ku saabsan barkimo waraabayaasha sunta ah ka akhri buuga yar ee laga helo Xarunta macluumaadka sunta.
Dhammaan degmooyinka Iswiidhan waxay leeyihiin maktabad loogu taloglay dadka halkaas ku nool.
Maktabadda waxaad xitaa ka amaahan kartaa buuggaag, ku akhrin kartaa joornaallada, kuna dhagaysan kartaa muusig oo isticmaali kartaa kombiyuutarada. Halkaas waxaa laga helaa buuggaag iyo joornaallo ku qoran luqaddo badan oo kala duwan. Maktabaddaha qaarkood waxay leeyihiin xitaa tababar luqadeed iyo caawimaadda casharada.
Adigu waxaad buuggaagta, joornaallada iyo cajalada cd-ga ku amaahanaysaa bilaash. Si aad u maahan karto waxaad u baahantahay kaarka maktabadda (kaarka amaahda). Kaas waxaad ka helaysaa maktabadda.
Wakhtiga amaahda badanaaba waa saddex toddobaad. Marka aad amaahato buug ama wax kale waxaad helaysaa warqadda rasiidhka taas oo ay ku qorantahay marka amaahdan dib loo soo celinayo. Haddii aanad wixi aad amaahatay aanad ku soo celin wakhtigeedi waxaad bixinaysaa kharashka la soo habsaamidda.
Maktabaddaha badankooda waxaa laga helaa kombiyuutaro iyo intarnatk. Haddii aad doonaysid inaad daabacdo ama sawirato dukumenti waa inaad lacag bixiso.
Maktabaddo badan waxay xitaa diyaariyaan maqaaxiyaha luqadda lagu tababarto. Halkaas ayaad kula kulmi kartaa dad si aad ugu tababarato luqaddo kala duwan.
Ka fikir inaad taxaddar yeellato haddii aad la kulmayso qof aad xiriir kula yeellatay intarnatka. Waxa fiican inaad qof u sheegto meesha aad tagayso oo go'aanso inaad qofkaas kula kulanto meel dadweynaha ka dhaxaysa.
Maxaa qofku ku samayn karaa bannaanka deegaanka dabiiciga ah iyo agtaada?
Meelahee ayaad kula talin lahayd qof inuu booqdo?